Onda Tablet v971 ကို Stock Firmware [4.0.3] ပြန်တင်မယ်… – Myanmar Mobile App Edition: Myanmar | ပြည်တွင်းပြည်ပမုိုဘိုင်းသတင်းများ
Huawei U8815(G300) root ဖောက်ခြင်း အပြည့်အစုံ (baseband 109808) Themes Collection For Windows7and 8 4G,CDMA,GSM,WIFI Coverage maps for android Root Call Blocker Pro v1.8.3.30 (2.66MB) Beat the Boss2(17 ) v1.6 Apk Game (42.28 Mb) Home
Published On: Mon, Mar 18th, 2013 Android Tutorials / မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်ရာ Tutorials | By JojOe (KOThu) Onda Tablet v971 ကို Stock Firmware [4.0.3] ပြန်တင်မယ်…
ကလွန်လိကလိလွန်ရင်းးး Firmware ဟန်းးးစက်ရုပ်လေးကမတက် …ပြီးတော့အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့်ပြန်တင်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ပါ….
Onda v971 stock Firmware ယူရန်..
ပြီးရင်…. Device manager ခေါ်ပါ…[My Computer ကို Right click>manage နှိပ်ပြီးပဲခေါ် Wimndows+R နဲ့ ပဲခေါ်ခေါ်အဆင်ပြေသလိုခေါ်ပါ..] Device manager>Universal Serial Bus Controllers ကိုသွားပါ။ USB Root Hub တိုင်းကို Right Click နှိပ်>>Properties>>Power Management >>Allow this computer to turn of this device to save power မှာအမှတ်လေးကိုဖြုတ်ပေးပါ…
ကဲ Power ပြန်တက်လာပြီးးအကောင်းအတိုင်းပြန်ရပါပြီ….အကယ်၍တင်နေရင်းးး Fail ပဲပြပြနေရင်တော့ Start ခလုတ်အောက်က Stop ခလုတ်လေးနှိပ်ပါ….USB ကြိုးဖြုတ် Run ထားတဲ့ Burning tool ကိုပိတ်…USB ပေါက်ပြောင်းထိုးပြီးအစကပြန်စပါ…..ဇွဲမလျှော့ပါနဲ့… ဘာမှမတတ်တဲ့ကျနော်တောင်ဇွဲမလျှော့ပဲလုပ်တာ ၁ နာရီလောက်အကြာမှာ…. အဆင်ပြေသွားပါတယ်…. ကိုယ်တိုင် စမ်းထားပီးသားနော် လုပ်ကြည့်ပါ…ကြိုးစားကြည့်ပါ..အဆင်မပြေရင်ကျနော်ကိုသံချောင်းခေါက်လိုက်..ပါ… ကူဖျတ်ပေးပါမယ်…
On Da Facebook>> Oo JojOe
11 comments on “Onda Tablet v971 ကို Stock Firmware [4.0.3] ပြန်တင်မယ်…”	s kbon March 18, 2013 at 9:20 am said:
Reply ↓	K T P Y M N on March 19, 2013 at 4:08 am said:
အကို C8813 Root တင်းပေပါဦးကို
Reply ↓	Htun Htun Win on March 19, 2013 at 10:58 am said:
ညီလေး C8813 ပ www.myanmarmobilesoftwaredeveloper.com မှာတင်ထားတာရှိတယ် ..။ ၀င်ကြည့်လိုက်..။
Reply ↓	aung hein on March 19, 2013 at 6:54 am said:
onda v972 ရောက်ပြီလားမသိဘူးဗျ
Reply ↓	miad on March 23, 2013 at 1:18 am said:
What’s the price of Onda V971 in myanmar.
Reply ↓	KyawZin on March 23, 2013 at 7:39 am said:
အကိုရေ Huawei Phone တွေ Fireware တင်နည်းလေးတင်ပေးပါလား
Power ဖွင့် ဘာမှ မပေါ်တဲ့အခြေအနေကို ပြောတာပါ …
Version မြင့်တာတို့ မြန်မာစာစနစ် ထည့်တာတို့ပဲ တင်ပေးတယ် Fireware တင်နည်းဆိုတာ
မတွေ့ပါဘူး ကျွန်တော်က ဆင်းရဲသားပါ ပိုက်ဆံမရှိလို့ Mobile သင်တန်းမတတ်နိုင်လို့ပါ
Reply ↓	Breeze on March 23, 2013 at 9:59 pm said:
Ployer momo7/9 tablet firmware ကျသွားလို့ပါအစ်ကို၊ Android logo ကနေ တက်မလာတော့လို့ပါ၊ firmware ပြန်တင်နည်းလေး ပြောပြပေးပါလား အရေးကြီးနေလို့ပါ၊
Reply ↓	thantzin on March 26, 2013 at 8:01 am said:
တရုတ် tablet တွေကိုရောဒီအတိုင်းတင်လို့ရလား စက်ရုပ်ကပါဝါကိုမတက်တော့ဘူး android ဆိုတဲ့စာတန်းမှာတစ်နေတယ်
Reply ↓	thantzin on March 26, 2013 at 11:04 am said:
မော်ဒယ်နံပါတ်က A018 version က 4.0.4
Reply ↓	Kyi Wai Thaw on March 27, 2013 at 4:40 am said:
ကျေးဇူး အများကြီးတင်ပါတယ်။ ဆိုင်ပို့ရမယ် ထင်ထားတာ အခုလို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လုတ်နိုင်အောင် အကူအညီပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်။
Reply ↓	aung on April 19, 2013 at 8:03 pm said:
အများကြီး ကျေးဇူးပါ ဒီထက် မက တိုးတက်အောင်မြင်ပါစေ ။